လက်ကား 4ft veneer ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်း ၀ ယ်သူ ပေါင်းစည်းခြင်း
၁။ အပြည့်အဝအလိုအလျောက်သစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းကို ၄ ပေ (သို့) ၈ ပေ (သို့) အခြားအရွယ်အစားသို့လိုအပ်သောသစ်တုံးကြီးများသို့ဖြတ်တောက်ခြင်း တိုင်းတာရန်နှင့်ဖြတ်ရန်လုပ်စရာမလိုပါ၊ ဤစက်သည်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်မားသောထိရောက်မှုရှိသည်။
2. Log loader -၎င်းသည် debarker နှင့်ကိုက်ညီသည်။ မှတ်တမ်းတစ်ခုသည် debarking တစ်ခုမပြီးဆုံးမီအနေအထား၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိလိမ့်မည်။ တစ်ခုပြီးစီးပြီးနောက် debarking အတွက်နောက်ထပ်မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုတွန်းလိမ့်မည်။
Log debarker -The debarke ၏ single roller နှင့် double rollers များသည်သစ်တုံးများကိုဖမ်းယူရန်နှင့် debarking ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်လွယ်ကူသော mace အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပုံစံ ၂ မျိုးရှိသည်။ ၁။ ဖျက်စီးထားသောအမှိုက်ကိုချေဖျက်နိုင်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အသုံးပြုမှုပိုမိုလွယ်ကူစေရန် 2. ပုံမှန်ပုံစံမနှိပ်စက်ပါနှင့်
3. Log loader-၎င်းသည် peeling machine နှင့်လိုက်ဖက်သည်။ peeling machine ဖြင့်အလိုအလျောက်ပြေးသည်။ လည်ပတ်ရန်လူမလိုပါ။ လုပ်အားခသက်သာတယ်။
၄။Auto centralizing system- ဤစနစ်သည်မောင်းသူမဲ့ပြေးဆွဲမှုအတွက်အရေးကြီးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည်။ ဤစနစ်သည်သစ်တုံးများ၏အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိနေသောသစ်လုံးနှစ်စကိုအခွံမခွာဘဲပိုမိုပျက်စီးစေခြင်းနှင့်အညစ်အကြေးများမရှိစေရန်သေချာစေသည်။
၅။Veneer peeling machine - ကျွန်ုပ်တို့၏ spindleless peeling machine သည် double roller မောင်းနှင်ခြင်းဖြစ်ပြီး veneer အထူနှင့်အရွယ်အစားကိုပိုမိုတိကျစေသည်။ အမြန်ချိန်ညှိနိုင်သော၊ လေးလံသောတာဝန်နှင့်ပိတ်ထားသောနှစ်မြှုပ်ထားသောအပ်ချည်ဝက်အူနှင့်စတုရန်းပြားချပ်ချပ်လမ်းညွှန်မီးရထားသည်စက်ကိုပိုမိုကြံ့ခိုင်။ တည်ငြိမ်စေပြီး ၀ တ်ခြင်းနှင့်ကိုက်ခြင်းတို့ကိုသက်သာစေသည်။
Veneer stacker -The stacker သည် peeling machine ၏အမြန်နှုန်းနှင့်အလိုအလျောက်ကိုက်ညီနိုင်ပြီးအရည်အချင်းမပြည့်မီသောထုတ်ကုန်များသည်လိုအပ်ချက်အလိုက်အလိုအလျောက်ခွဲခြားနိုင်သည်။
နောက်တစ်ခု: 8ft & 9ft veneer peeling line